I-China ekhangayo ye-Sola yeentyatyambo eyenziwe ngezandla eyenzelwe ukuba ibe yiFreyisi yomzi mveliso weOrisi nabathengisi | IHoyer
Intyatyambo yeSola eQhakazileyo eyenziwe ngeZandla eyomileyo yeoli yeZithambiso
- I-100% yezinto zendalo. Intyatyambo yeSola yenziwe ngomthi waseSesbania kunye nomqhaphu wekotoni.
- Imilo yeentyatyambo: i-rose, rosaceae, ipeonia, ityatyambo, ilaphu, chrysanthemum njalo njalo ...
Ubungakanani: Ububanzi: 4cm / 4.5cm / 5cm
Umbala: mhlophe okanye ngokwe mfuneko yakho
I-MOQ: I-1,000pcs, ubuncinci obuncinci buyamkeleka ukuba sinesitokhwe
I intyatyambo yesola Iveliswa apha eMzantsi Melika. Njengombhalo ophambili wokwenza iintyatyambo ezenziwe ngezandla, zihlala zinika abantu ithemba ngabalinganiswa abakhanyayo, abathambileyo nabathambileyo. Emva kokuvuna, yomiswa elangeni, kodwa umphefumlo wayo ushiye emhlabeni kwaye unqunyulwe ube iziqwenga. Emva kokuba yenziwe ngoochwephesha, iba yintyatyambo entle, esetyenziswa ngokubanzi kwivumba elingenamlilo elinombonakalo omuhle nenhle, ikwacacisa ubushushu obuthandekayo be-aromatherapy yeoyile efanelekileyo.
Ubungakanani: ububanzi be-4cm / 4.5cm / 5cm okanye ubungakanani obucwangcisiweyo
Faka isicelo ngentambo eyosiweyo okanye unamathele kwibhotile yakho yevumba elimnandi ukuze ugxile kwaye uvuse ivumba njengesiqhumiso se-aromatherapy yasekhaya.
-Ugqibelele ukusebenzisa njengomhlobiso we-spa wasekhaya.
Intyatyambo nganye yenziwe ngezinto zendalo ngesandla, inkqubo iyinkimbinkimbi kakhulu. Kukho iziphoso ngamanye amaxesha zokutshintsha okungafaniyo, amachaphaza amnyama, iinkozo ezinomthi ophuzi kunye noqhekeko lwentambo ngexesha lenkqubo yokwenza izinto. Ukuba intyatyambo ityunyiwe okanye yonakele xa kuhanjiswa intetho, khumbula ungayichukumisi ngezandla. Ingahamba kakuhle kwipateni yentsusa emva kokuba i-oyile ityaliwe.
Ubungakanani Ububanzi: 4cm / 4.5cm / 5cm okanye ubukhulu ngokwezifiso I-1.57 intshi / 1.77 intshi / 1.97 intshi okanye ubungakanani obucwangcisiweyo
Umbala mhlophe Umbala ngokwezifiso wamkelekile
I-MOQ I-1,000pcs Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Edlulileyo: I-3mm * 25cm Reed Stick ye-Diffuser Bottle
Okulandelayo: Iintambo zeRed Feri zoMdaka oMiselweyo oSetyenzisiweyo kwi-Diffuser oil Set
sola yentyatyambo iyonke